भर्ती बन्द गर्ने कि खुला राख्ने ?
बृटिशलाई गोर्खा सैनिकलाई फकलेण्डको युद्धमा अग्रपंक्तिमा लगायो, अलिकति पनि नहिचकिचाई नेपाली गोर्खाले बहादुरसाथ लडे । वीरतासाथ लड्नु, खटाएको ठाउँमा तत्काल पुग्नु, निजी सुखसुविधाको वास्तै नगर्नु र पाएको जिम्मेवारी इमान्दारिताका साथ पूरा गर्नु नेपालीको जन्मजात गुण हो ।
त्यसैले त विश्वशान्ति देखि भारतीय गोर्खामा मात्र होइन, आजकल मलेसिया, सिंगापुर, खाडी मुलुकहरुमा समेत गोर्खा सैनिकको माँग बढेको छ ।
अमेरिका र उत्तर कोरियाजस्ता आणविक शक्तिशाली राष्ट्रको शिखरवार्ता गत महिना सिंगापुरमा सम्पन्न भयो, त्यो शिखरवार्ताको सुरक्षा जिम्मेवारी नेपाली गोर्खाले लिए र पाएको जिम्मेवारी पूरा गरे । यही पहिचानले नेपाली युवाको माँग बढेको छ, अव बृटिश सेनाले नेपाली युवतीलाई पनि सेनामा भर्ति गराउने योजना बनायो ।
बृटिश गोर्खामा भर्ति रोक्नुपर्छ भन्ने कम्युनिष्ट सरकार छ देशमा तर त्यही बृटिश गोर्खामा नेपाली युवतीलाई पनि भर्ना छनौट गर्ने खबर आउँदा कोही बोलेनन् ।
अर्थात सडकमा चिच्याउन र सत्तामा मुख टालेर बस्ने परम्परा छ नेपाली नेताहरुको । यी नेपाली नेता हुन् कि नेतामा छेपारो प्रवृत्तिको विकास भएको हो ?
नारायणमा पानी जहाज आउनेभो
प्रधानमन्त्रीले पुषमा पानी जहाज चढेर कलकत्ता जान तैयार हुनोस् भनेर भनिहाले, अध्ययन नै भएको छैन । इज्जतका लागि पनि भारतीय पानीजहाजमा नेपाली झण्डा गाडेर नल्याइ त भएन । ओलीको एउटा टीम यही कार्यमा लागेको जानकारी पर्यटनमन्त्रीले दिएका छन् । उनका अनुसार कोशीमा होइन, नारायणीमा नेपाली झण्डा गाडेको पानीजहाज आउँछ, ढुक्क हुनोस् । आउँछ आउँछ ।
प्रदेश २ मा बेटी आन्दोलन
प्रदेश २ मा बेटी पढाओ, बेटी बचाओ अभियान तीब्र पारेका छन् मुख्यमन्त्रीले । त्यसै पनि सामाजिक सेवाको, कर्मचारीको तलव महिनौदेखि आफ्नै खातामा राखेर भ्रष्टाचार भएको र उक्साउने मुख्यमन्त्री हटाउने कि राख्ने भन्ने मुद्दा भित्रभित्रै चलिरहेको छ । मोदी आउँदा आन्तरिक मामिलाको सार्वजनिक उजुरी गरेको, हिन्दी भाषालाई मान्यता दिन खोजेका कारण मुख्यमन्त्री विवादमा छन् । यी सबै आक्षेपलाई विषयान्तर गर्न मुख्यमन्त्रीले बेटी बचाओ, बेटी पढाओ अभियान तीब्र पारेका हुन् ।